Uwe ejiji Jalisco, njirimara nke njirimara Mexico | Akụkọ Njem
Luis Martinez | 12/05/2021 09:19 | omenala, Mexico
Uwe a na-ahụkarị nke Jalisco nwere ọtụtụ myirịta na akwa uwe nke ihe mariachis, ruo n’ókè na ha na-enwekarị mgbagwoju anya. N'ezie, a kwenyere na a mụrụ ndị nke ikpeazụ n'obodo Jalisco nke Nchịkọta. Otú ọ dị, ha abụghị otu ihe. Nke abụọ n'ime ha na-etinye bọtịnụ na uwe ogologo ọkpa na jaket, na mgbakwunye na inwe ọtụtụ agba dị ukwuu.
Agbanyeghị, ezigbo ụdị ejiji Jalisco, nke isiokwu a ga-ebi, dị mma. Dị ka aha ya na-egosi, anyị ga-agwa gị gbasara uwe mara mma nke steeti Mexico a, nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ ma dịrị n'akụkụ nke Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima, yana Oke Osimiri Pasifik.
1 Ihe dị iche iche nke ejiji ejiji nke Jalisco
1.1 Akụkọ banyere uwe
1.2 Jalisco na-ahụkarị ejiji maka ụmụ nwanyị
1.3 Jalisco ejiji maka ụmụ nwoke
2 Kedu mgbe eji ụdị ejiji Jalisco
2.1 Robọchị Charro
Ihe dị iche iche nke ejiji ejiji nke Jalisco
Anyị ga-amalite site na ịkọ akụkọ ihe mere eme gbasara uwe a wee lekwasị anya na uwe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Ha abụọ dị ezigbo iche, ọtụtụ mara mma ma na-eji obi ụtọ nke ụmụ nwanyị.
Akụkọ banyere uwe
Mmalite nke uwe charro, nke, dika ị nwere ike ịchọpụtaworị, bụ nke ọdịnala sitere na Jalisco, malitere na narị afọ nke XNUMX. N'ụzọ dị ịtụnanya, a mụrụ uwe na-egosipụta Mexico ná mba ọzọ, dị ka ekwenyere na ya, n'ala ndị Spain, ọkachasị na Salamanca.
Dịka ị makwaara, a na-akpọ ndị bi na mpaghara a, kpọmkwem, charros. Na, ọ bụrụ na ị na-ele uwe ha mara mma, ọ bụ eziokwu na ha yiri uwe ndị Jalisco. Ndị Spain nwere uwe ojii siri ike, jaket dị mkpụmkpụ nke otu agba ahụ, na akpụkpọ ụkwụ dị elu. Ọzọkwa, okpu yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na o nwere obere nku.
Charros na uwe ejiji nke Jalisco
Uwe a ga-agarịrị America na mbata nke ndị Hispanik ma nabata ya Mpaghara Jalisco. Agbanyeghị, ọ natara ọtụtụ mgbanwe. Na narị afọ ndị sochirinụ, ọ ka mma site n'ịgbakwunye ọtụtụ ejiri aka mee ihe ịchọ mma na ihe ịchọ mma. Ugbua na XIX, ọ bụ nke ndị chinacos, aha a kpọrọ ndị na-arụ ọrụ n'ubi.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na eze ukwu ahụ Maximilian nke Habsburg Ọ bụ ezigbo mmasị na charro uwe. Ọbụna ọ jiri ya ọtụtụ oge na-anwa ime mgbanwe maka mba ọhụrụ ya. Ugbua na mgbanwe mgbanwe Mexico, uwe a ghọrọ ihe ama ama quintessential mexican ekike, karịrị akarị nke ụdị mpaghara ndị ọzọ nke mba ahụ (ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ndị nke abụọ, anyị na-adụ gị ọdụ Akụkọ a).
Agbanyeghị, ugbu a ọ bụghị ụdị uwe charo acha niile bụ otu. Ha dị iche uwe ọrụ, uwe zuru oke na uwe zuru ezu, ọ bụ ezie na o nweghi ọdịiche dị n'etiti ha. Naanị otu onye bi na okomoko nke ihe mkpuchi na ihe ịchọ mma na ha webatara. Dịka ị nwere ike iche, nke mbụ nwere anya udo karịa nke ikpeazụ, ọ bụ ezie na ha niile mara mma ma maa mma.
Ọ bụrụ n’ị leta Guadalajara, isi obodo na obodo a ma ama na steeti Jalisco, ọ gaghị esiri gị ike ịchọta ụdị ejiji gị. N’ụzọ ezi uche dị na ya, ndị bi na ya adịghị eji ya eme ihe kwa ụbọchị, kama ha na-eji ya eme ihe Ha na-eji ohere ọ bụla eme uwe ya. Mana, na-enweghị oge ọzọ, anyị ga-agwa gị gbasara ụdị ejiji Jalisco maka ụmụ nwanyị.
Jalisco na-ahụkarị ejiji maka ụmụ nwanyị
Jalisco ahụkarị nwanyị uwe
Womenmụ nwanyị Jalisco na-eyi otu uwe nwere ogologo sket. Emere ya poplin, olu ya dị elu na uwe aka ya bụ ụdị akpa. Ọzọkwa, n'akụkụ elu ya, na elu obi, ọ na-ebu bọọlụ ndị yiri vee na yitewere. Uwe elu ahụ dịkwa obosara.
Banyere agba, ọ na-abụkarị otu ụda, ọ bụ ezie na nke a dị iche na nke obi ụtọ agba agba na o yikwasịwo ekpuchi ya nakwa na eriri nke ọ na-eyi dị ka ihe ịchọ mma. Banyere akpụkpọ ụkwụ ahụ, ọ bụ eriri na-eme ya ma nwee ngwa dị iche iche. N'ikpeazụ, a na-eji isi ya kee ntutu isi ya na nke ahụ na-egosi na uwe ahụ.
Jalisco ejiji maka ụmụ nwoke
Banyere uwe ndị nwoke na-eyi, a na-eke ya, n'akụkụ ya nke elu, uwe elu nke a obere jaket. Ọ na-erute akụkụ ala nke thorax na uwe aka ya dị mkpụmkpụ iji gosipụta ya ọla ịchọ mma nke ụmụ bebi. N'otu aka ahụ, enwere ike iji ya chọọ ya mma bọtịnụ iri asaa nke otu ụda ahụ, ọ bụ ezie na ha nwekwara ike ịbụ ọla edo.
Banyere uwe ogologo ọkpa ahụ, ha siri ike, suede ma ọ bụ akwa na ụda ojii. Ha na-ebukwa ewepụtụ niile ụkwụ. A na-agbakwunye uwe ahụ site na akpụkpọ ụkwụ lace nke nwere agba dị ka uwe ahụ.
A ga-ekwuru aha pụrụ iche sombrero. Emebeburu ya iji gbochie mmetụta nke Jalisco anyanwụ yana yana nchekwa megide ịda site na ịnyịnya. N'ihi nke a, ejiri ntutu, akpịrị ajị anụ ma ọ bụ ahịhịa ọka mee ha, ha nwere nkume anọ ma ọ bụ rịbọnụ na iko ha nke mere ka ọ dịkwuo okpukpu abụọ.
Ọnụ nke okpu a na-ahụkarị bụ nnukwu ma saa mbara, yana akpọrọ na azụ ya. N'ikpeazụ, a na-achọ ya mma mgbe ụfọdụ shawl ma ọ bụ akwa akwa. Nzube a bara uru nke ukwuu maka ọrụ ubi nke na ọ bịara bụrụ nke a na-ahụkarị na Mexico.
N'ikpeazụ, ibe ọzọ nke na-enweghị ike ịlafu n'ụdị charro bụ bechapu. N'okwu a, ọ bụghị uwe, kama ọ bụ ụdị blanket nke ndị na-agba ịnyịnya tinyere ịnyịnya nke ịnyịnya ya. Yabụ, ị gaghị ahụ ya mgbe ị gara ịgba egwu ma ọ bụ paradaịsọsị na ụkwụ, mana ị ga-ahụ ya mgbe ndị njem na-agba ma ọ bụ charros na-egosi na anyị ga-egosi gị ọzọ.
Kedu mgbe eji ụdị ejiji Jalisco
Charra na-aga agha
N'ezie, ozugbo anyị kọwara ihe ejiji Jalisco maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, anyị ga-elekwasị anya n'ịgwa gị okwu banyere ihe omume na ememme ebe a na-ahụkarị ebe ndị mmadụ na-eyi uwe.
Ihe ngosi ahụ kachasị mma ebe a na-eyi uwe ndị ahụ charrería. Ihe omume ọdịnala ọdịnala nke mba Aztek na-enweta aha a. Ha na-etolite na mpaghara ndị a na-akpọ ichebe charo ma ha mejupụtara ndị na-agba ha ịnyịnya ndị na-eme mmega ahụ dị iche iche n’azụ ịnyịnya ha.
Dị ka egwuregwu, amụrụ ya na mbido narị afọ nke XNUMX iji cheta ọrụ ehi ndị dị n'ọhịa na-adịghịzi adị. A haziri charrería na Mexico site na gọọmentị na ọdịnala ya amarala dị ka Ihe Okike mmadu nke UNESCO chekwara.
Ugbu a, ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ dị mkpa na charrería. Ọbụghị naanị maka na a na-ahọpụta otu afọ ọ bụla reina nke ahụ na-ahụ maka ịmalite mmemme dị iche iche, mana ọ bụkwa n'ihi na-ekere òkè na asọmpi egwuregwu. Ha bụ ndị Amazons na-esonye, ​​karịa ihe niile, na ọzụzụ a maara maka ya chara skirmish. O nwere ndi otu egwu asatọ ndi na-ekwe ukwe n’azu inyinya ha na ukwe nke egwu a.
Mana, dabara nke ọma, a na-agba ọtụtụ chara ume ịme ụdị ngosi ndị ọzọ. N'ime ndị kachasị mkpa, anyị ga-akpọrọ gị ịnyịnya, ndị oké ehi na ndị na-agba ịnyịnya, piale dị na kwaaji ahụ, manganas dị n'ụkwụ ma ọ bụ n'ịnyịnya, ndị e depụtara ná mgbaaka ma ọ bụ usoro ọnwụ.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, n'ọnọdụ ndị a ụmụ nwanyị na-eyi ụdị ngwa ndị ọzọ maka akwa ha. N'ime ha, akpụkpọ ụkwụ nwere spurs, okpu na ndị ọrụ. Na mgbakwunye, ha dokwasịrị n’elu ịnyịnya ahụ ugwu pụrụ iche a na-akpọ ngwugwu.
Charros na-anọchite anya ọnwụ
Charrería jikọtara onwe ya na ọdịnala Mexico nke na Septemba 14 ọ bụla mba ndị Aztek na-eme emume ahụ Robọchị Charro. Gburugburu ókèala ya (ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ otu edemede gbasara Veracruz, pịa ebe a) A na-eme ndị na-agba ịnyịnya na egwu iji mee ya. Banyere nke ikpeazụ, ndị mariachi ha bu ndi n'eziokwu.
Banyere steeti Jalisco, nke anyị na-ekwu maka ya, n'ụbọchị ahụ Guadalajara na-eme ememme ahụ Nzukọ Mba Nile nke Mariachi na Charrería. Dị ka ị pụrụ iche n’echiche, a chọrọ mma n’okporo ámá ndị dị n’isi obodo ahụ ma ọtụtụ puku ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-eji ụkwụ na-agafe n’ime ha yiri uwe ndị Jalisco na-atụgharị ma na-akọwa egwu ọdịnala.
Ihe omume na-tumadi lekwasị ke Ogige Ntọhapụ, ebe enwere otutu ememme. Ma e nwekwara parades, gala arụmọrụ na Akpịrị na-eme ihe nkiri na ọbụna ọtụtụ ndi ẹkwọ ke Basilica nke Zapopán.
Otu ndi otu na-aru egwu ndi egwu dika Sirop syrup, nke a makwaara dị ka "okpu Mexico" n'ihi na ọ hapụrụ ala ma gbaa egwu gburugburu ya. Ọ bụ ịgba egwu mbedo nke onye anyị ga-achọ maka ya na mgbanwe mgbanwe Mexico.
Kwuru nnọọ ewu ewu na ụdị ememe bụ Culebra, agba egwu nke na-emegharị ọrụ na mpaghara, ndị Iguana na Na-agba ịnyịnya, n'etiti egwu ndị ọzọ ndị ntụgharị okwu na-eme mgbe ha na-ege ntị na mariachis na-ada ụda. Nke a bụ aha abụ ndị na-esochi ịgba egwu na ngosi nke charrería na na, ya mere, nwere njikọ chiri anya na ụdị ejiji nke Jalisco.
Na mmechi, anyị gwara gị banyere ụdị ejiji Jalisco maka ma nwoke ma nwanyi. Ma anyị akọwakwara gị mkpa ụwa charería dị na Mexico, nke gụnyere akwa a na kwa ụda mariachi. Ihe a niile edozila ọdịbendị gafere oke ala Aztec iji bụrụ onye ama ama n'ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » Ahụkarị Jalisco uwe
Ebee ka ịga na Mee: 10 kacha mma ebe